Faah-faahin:-Mas’uul Ka Tirsanaa Dowladda oo Qarax Lagu Dilay Muqdisho – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax gaari lagu dhajiyay oo saakay aroortii ka dhacay Magaaladda Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Qaraxaan ayaa ka dhacay nawaaxiga taalada Daljirka Daahsoon Degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir.
Sida ay inoo xaqiijiyeen Saraakiil ciidan, Qaraxa ayaa lagu xiray qaybta darawalka uu fariisto ee kursiga hoostiisa, wuxuuna qarxay xili uu marayay Taaladda Boondheere, waxaana qaybaha dambe ka go’ay darawalkiisa gaariga waday oo ugu dambeyn halkaasi ku dhintay.
Qaraxaan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay Haweeney gaariga saarneed iyo gabar yar oo ku sugneed maqaaxi ku taala agagaarka taalada Daljirka Daahsoon.
Baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in shaqsiga lagu dilay qaraxa uu kamid ahaa shaqaalaha Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya islamarkaana lagu magacaaci jiray Fuaad Jaamac Salaad.
Fuaad ayaa la sheegay in saakay Haweeney Ehel wadaag ay ahaayeen uu u waday Garoonka diyaaradaha Muqdisho si halkaas ugu dhoofto islamarkaana ay u gaarto magaaladda Hargeysa ee caasimadda maamulka Somali-land, iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay xaaaladdo caafimaad u joogtay Magaaladda Muqdisho.
Ma Jirto cid ilaa haatan sheegatay Mas’uuliyadda qaraxaan saakay ka dhacay Magaaladda muqdisho.